‘माओवादी पार्टी कति वर्षमा सकिएला ? नाटक अलि लामै भयो’ माओवादी सखाप नपारे नेपालीको जीवन सुखी हुने देख्दिन – Butwal 24 News
October 19, 2021 October 19, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on ‘माओवादी पार्टी कति वर्षमा सकिएला ? नाटक अलि लामै भयो’ माओवादी सखाप नपारे नेपालीको जीवन सुखी हुने देख्दिन
तत्कालीन माओवादी पार्टीबाटै प्रधानमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराईको आर्थिक सल्लाहकारसमेत बनेका खनालले नेपाली काँग्रेसले माओवादीसँग हात मिलाउनु ऐतिहासिक गल्ती भएको पनि जिकिर गरेका छन् । ‘नेपालमा रोकिएको विकासका लागि माओवादी सिद्धान्तको अन्त्य आवश्यक छ,’ पछि बाबुरामकै नयाँ शक्ति पार्टीमा समेत आबद्ध भएका खनालको भनाइ छ । उनले बडा दसैँ २०७८ को शुभकामना भन्दै आगामी चुनावमा कसैलाई पनि माओवादी पार्टी मत दिने अवस्था उत्पन्न नहोस् भन्दै सो बन्धनबाट मुक्ति मिलोस् भन्ने कामना समेत गरेका छन् ।
उनले थप लेखेका छन्, ‘राजा फर्कन त गाह्रो छ। चाहना राख्नु अलग कुरा हो। प्रति व्यक्ति आम्दानी एक भित्ता मात्र बढे पनि माओवादी सखाप हुन्थे। माओवादी सखाप नपारे नेपालीको जीवन सुखी हुने देख्दिन म त। डर के हो भने आफू सकिने अनुमानले विकासका सारा काम रोक्ने माओवादी षडयन्त्र हुन सक्छ !’